Kuratidza zvinyorwa neelebheri Prachovské skály
Prachovské skály inzvimbo yedombo rejecha, nzvimbo yekuchengetedza uye chikamu cheBohemian Paradise Yakachengetedzwa Landscape Area, iri pamakiromita mashanu kusvika kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweJičín pakati pePerachov, Pařezská Lhota, Dolní Lochov naBlaty muHradec Králové Region. Iro dombo massif rakatanga munguva yeMesozoic senge yakadzika Cretaceous sediment. Iyo nzvimbo yakachengetedzwa iri mukutarisira kweAOPK ČR - hofisi yedunhu muLiberec.
Geomorphologically Prachovské mabwe chikamu Jičínská rose Upland, Upland podcelku Turnovská, dunhu Vyskeřská Highlands uye podokrsku Prachovská zvikomo, izvo zvakaparadzana geomorphological nhengo.
Pamwe pakupera kwezana ramakore rechigumi nematatu Veliš castle yakavakwa pane imwe yemakomo ari pasi peasalt nenzvimbo yepedyo yeVeliš. Makumi emakore gare gare ...